Ciyaartooyda xulka qaranka k/cagta soomaaliya oo qiyaano qaran oo ula kac ah lagu sameeyay. | www.somalifootball.com – Sears Dental
Ciyaartooyda xulka qaranka k/cagta soomaaliya oo qiyaano qaran oo ula kac ah lagu sameeyay. | www.somalifootball.com
Xiriirka K/cagta ee CECAFA ee bariga iyo bartamaha Africa ayaa baritaan ku sameynaya sababaha ka dambeeya in ciyaartooyda xulka qaranka K/cagta ee Soomaaliya aysan weli soo gaarin wadanka Tanzania oo galabta ay ka furmayaan ciyaaraha bariga iyo bartamaha Africa.
Ciyaartooyda Soomaaliya ayaa la filayay in ay yimaadaan magaaladda Darasalaam maalinkii Talaadada ee la soo dhaafay, hase ahaatee ilaa iyo hada weli lama hubo imaanshahooda iyo ka qeyb galkooda Koobka.
Xoghayaha xiriirka SOomaaliyeed ee K/cagta C/qani Siciid Carab oo ah guddoomiyaha tartanka CECAFA ayaa ii sheegay in ay ku dadaali doonaan in Somalia ay timaado ilaa caawa fiidkii.
Waxaa muuqata qiyaano ula kac ah oo ay sameeyeen guddiga qaban qaabadda ee Local Organizing Committee, taas oo ah in xitaa duulimaadkooda aan la diyaarin, sababtoo ah Somalia waxay group A kula jirtaa Tanzania, iyadoo ujeedadoodu ay tahay in ay Somalia baaqato, isla markaana ay 3 dhibcood meel cidlo ah ka helaan.
Xulka Somalia ayaa hore sanadkii 2009 wuxuu 1-0 uga adkaaday ciyaartooyda Tanzania oo koobka rajo ka lahaa, taas oo sababtay in ay wareega 2-aad ku haraan, maadaama ay guul darro kala kulmeen ciyaartooyda SOomaaliya, taasina ay sababatay in xitaa tababarahoodii reer Brazil Marcio Maximo ay shaqada macallinnimo ka eryaan, iyagoo hadana ka cabsi qaba in guul darro kale oo qaraar la huwiyo, maadaama ciyaartooydeena ay bilihii ugu dambeeyay tababar xoog leh ku qaadanayeen wadanka Jabuuti.
Saxaafadda wadanka Tanzania ayaa qaarkood sheegayaan in Somalia ay ciyaaraha ka baaqatay, arrimo la xiriira dhinaca duulimaadka, hase ahaatee ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay CECAFA.
Wadanka Tanzania waxaa soo gaaray hal ciyaaryahan oo Soomaali ah, waana kabtanka xulka qaranka Ciise Aadan Abshir (Ciise Dheere) oo ii sheegay inuu la yaaban yahay qiyaana qarameedka nuucaan ah.
Weeraryahankii hore ee kooxda Simba ee wadanka Tanzania Ciise dheere oo si fiican looga yaqaano wadankan ayaa taageerayaashiisa reer Tanzania ay uga hortagen garoonka diyaaradaha ee magaaladda Darasalaam, waxaana Ciise uu uga mahaceliyay soo dhaweynta diiran ee ay sameeyeen taageerayaashiisa.
Kabtan Ciise oo ka soo duulay magaaladda Oslo ee wadanka Norway ee uu degan yahay ayaa ii sheegay inuu aad ugu farxsanyahay in mar kale uu xirto maaliyadda qaranka SOomaaliya, isla markaana uu ku ciyaaro garoonka weyn ee National Stadium oo sanadkii uu joogay u shabaqiisa ku hubsaday 12 gool.
Ciise Abshir ayaa sugaya ciyaartooyda kale ee xulka qaranka oo ilaa iyo hadda soo gaarin magaaladda Darasalaam, taas oo sababtay xitaa in dib loo dhigo ciyaartii furitaanka tartanka CECAFA ee xulkeenu la yeelan lahaa wadanka Burundi.
Ciise ayaa ka codsaday jaaliyadda SOomaaliyeed ee wadanka Tanzania in ay taageero buuxda u muujiyaan ciyaartooyda qaranka, “Waa cadaalad darro in ciyaartooyda qaranka la dhaleeceeyo idigoon taageerin niyadeed, dhaqaale iyo muraal midna u fidin” ayuu yiri Ciise oo intaas ku daran in imaanshaha taageerayaasha ee garoonka ay tahay mid niyada wanaagsan siineyna ciyaartooyda ku jirta dagaalka kubadeed.